Soo dejiso sawirka Xiaomi Pocophone F1 waraaqaha Pocophone f1 | Androidsis
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha caadeysta inay beddelaan muuqaalka asalka ah ee boosteejooyinkooda, daal dartiis, ama si fudud ay u doonayaan darteed si gaar ah taabasho u sii terminaalkaaga. Mar kasta oo soo saaruhu ku soo bandhigo moodeel cusub suuqa, waraaqaha la duubo ayaa inta badan ah shayga ay jecel yihiin noocyada isticmaaleyaashu.
Mid ka mid ah taleefannadii ugu dambeeyay ee si rasmi ah loo soo bandhigay ayaa ah Xiaomi Pocophone F1, oo ah taleefan casri ah oo ka badan astaamaha xiisaha leh ee qiimaha caadiga ah ee Xiaomi: dhulgariir. Terminalkan cusub, wuxuu ku imanayaa gacanta hoosteeda iyadoo waraaqo kala duwan, waraaqaha waraaqaha ee dhab ahaan in ka badan hal jecel inay soo dejiyaan.
Dhamaan waraaqaha la heli karo si loo soo dejiyo dhamaadka qodobkan, ku jiraan qaraarkoodii asalka ahaa (2.246 x 1.080) markaa waxaad si badbaado leh ugu isticmaali kartaa ficil ahaan wax terminal ah oo xallintaas ama ka hooseeya leh. Haddii terminal-kaaga uu leeyahay xal sare, waxaad ogaan kartaa dib-u-sameynta, laakiin waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa.
ka toddobo sawir oo ka imanaya gacanta Pocophone F1 wuxuu naga siiyaa sawirro aan la taaban karin, oo leh joog weyn oo cas. Waxaan sidoo kale helnaa laba sawir oo si aad ah noo xusuusinaya, ugu yaraan dadka isticmaala Mac, nooca xiga ee nidaamka hawlgalka Apple ee kombiyuutarada, macOS Mojave, maadaama ay na tusayso muuqaal isku mid ah oo buur ah maalintii iyo habeenkiiba. , shaqeyn kuxiran waqtiga maalinta ayaa mas'uul ka ah bedelida gidaarka gidaarka kooxdeena.
para soo dejiso Sawirada 3D HD ee Xiaomi Pocophone F1 ee xallinta asalka ahKaliya waa inaad gujisaa mid kasta oo iyaga ka mid ah. Marka lagu soo bandhigo shaashad buuxda, waa inaad ku riixdaa shaashadda si aad u muujiso ikhtiyaar ikhtiyaar badbaadin ah. Markaan ku keydinno terminaalkeenna, waxaan hadda heli karnaa galka meesha uu ku yaallo oo waxaan u isticmaali karnaa sida gidaarka gidaarrada casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Soo dejiso sawirada Xiaomi Pocophone F1
Soo bandhigida Maamuuska 8X iyo 8X Max ayaa la xaqiijiyay bisha Sebtember ee soo socota